Royal Holloway, University of London - Isifundo ku: United Kingdom
Royal Holloway, University of London Yokuxhumana
isifinyezo : RHUL
Wasekelwa : 1849
Ungakhohlwa xoxa ngeRoyal Holloway, University of London
Bhalisa eRoyal Holloway, University of London
Royal Holloway ungomunye ehamba phambili emayunivesithi wokwenza irhubhululo-olunzulu UK, nge 21 iminyango academic kanye nezikole ezinqamula ubuciko kanye Humanities, sciences, nesayensi yezenhlalo, ukuphathwa, ezomnotho kanye nomthetho.
Sihlanganisa ucwaningo emhlabeni-class nge nombono global, nokho ngesikhathi esifanayo, campus yethu ine banomuzwa umphakathi esisiza ugqozi abantu ukuba siphumelele. Zethu 9,000 abafundi bafunde kusuka izifundiswa abacwaningi nasemhlabeni wonke futhu ngenkathi futhi waziwa ngegama ngokwabo.
Akhiwa phezu kwesisekelo kwezenzo zokuphana, sithatha igama lethu omunye wabasunguli be yethu, usomabhizinisi uVictoria Thomas Holloway, base bakha Royal Holloway njengoba ekolishi ngabesifazane 1886. Holloway wayengeyena wemibono eqaphele ukuthi izinzuzo zomhlatshelo afundise abesifazane; Elizabeth Jesser Reid, wezinguquko ukuphayona social, eyasungulwa Bedford College 1849 njengoba wokuqala ngqa ekholishi yabesifazane UK.
Amaziko ezimbili ahlanganisiwe e 1985 futhi ngamandla abo elihlangene futhi umlando uye wenza Royal Holloway nyuvesi emhlabeni-ehola kuba namuhla. Lezi Victorians okucabangela imiphumela yesikhathi eside, hhayi nje kuphela wasishiya sezenkolo Umsunguli yethu ngaphezu kokuvamile sika (abalingisa a Amahhotela French) futhi umlando academic 'firsts'; Umoya wabo futhi uphila ngezindinganiso zethu kanye namasiko - nekufaka abantu ukuze uphumelele yize nokugcina umoya wethu emphakathini.
Sine best-ka-kokubili-worlds nendawo eyingqayizivele; safe, campus eluhlaza in Egham, Surrey – ngaphansi kwe 40 imizuzu ngesitimela ayevela enkabeni London anesixhenxe nje zamakhilomitha ukusuka Intl sezindiza, ekudaleni imvelo lapho umphakathi obumbene kuchuma.
campus yethu ingenye enhle kunazo zonke emhlabeni eminingi nokufundisa kanye nesifundo izikhala, imigoqo nezindawo zokudlela ezinhle, eliphezulu accommodation, nezindawo zemidlalo. Konke lokhu lihlelwe 135 esingamahektare parkland emangalisa.
yokufundisa Iningi umsebenzi womphakathi lwenzeka ezikoleni kanye, kwasinda Kingswood Hall (nje kwemayela), lokhu lapho undergraduates kakhulu bahlala unyaka wokuqala. Kuba yindawo ngobungane, nge umuzwa onamandla umphakathi njengoba abafundi omusha ngokushesha baba ubuso ajwayelekile.
Isakhiwo umsunguli kungomunye ewumbukwane izakhiwo enyuvesi wezwe, futhi ekhaya ukuze Isithombe Igalari wethu odumile equkethe iqoqo Thomas Holloway okuhle imidwebo uVictoria, futhi yesonto yethu enhle. Liphinde iyisonto ehholo lokudlela wezincwadi futhi inikeza ekhaya 500 abafundi.
elitholakala nje 40 imizuzu ngesitimela waseLondon namamayela eziyisikhombisa Intl, nge eziningi ezikhangayo, yezemidlalo nokuzijabulisa izindawo kufinyeleleka kalula, uzoba bathande indawo yethu brilliant.
Kuye kwanyatheliswa izincwadi Comparative & Amasiko
Izilimi Modern, Ukufundwa kwezincwadi & Kwamasiko
Ezombusazwe & Budlelwano International
I-Royal Holloway College yasungulwa ngusomabhizinisi waseVictorian kanye no-philanthropist uThomas Holloway khona 1886. Isigidi esinezigidigidi esazenzakalelayo senza ingcebo yaso emithini yamalungelo obunikazi futhi, ngemuva kokuqala inkulumo mpikiswano esesidlangalaleni ethi 'indlela engcono yokusebenzisa ikota yemigidi noma ngaphezulu', uthathe izeluleko zomkakhe zokuthi ikolishi labesifazane lizofakazela 'okuhle kakhulu emphakathini'.
I-Royal Holloway College, liphefumulelwe kakhulu iChâteau Chambord eSigodini saseLoire, kwavulwa yiNdlovukazi uVictoria ku 1886. Isakhiwo Somsunguli, eyakhelwe emaceleni ama-quadrangles amabili futhi ifaka chapel enhle yesithombe kanye negalari yezithombe, ungomunye wamabhilidi amahle kakhulu emhlabeni.
UThomas Holloway wayengeyena umbono wokuqala weVictoria ukuthola izibonelelo zemfundo yabesifazane. Elizabeth Jesser Reid, wezinguquko ukuphayona social, eyasungulwa Bedford College 1849 njengekolishi lokuqala eGreat Britain lemfundo ephakeme yabesifazane. Ngo 1900, IRoyal Holloway College kanye neBedford College baba yingxenye yeNyuvesi yaseLondon, isikhungo sokuqala e-UK ukunikezela ngama-degree kwabesifazane.
Bobabili uBedford noRoyal Holloway bavumile iziqu zabesilisa okokuqala ngqa 1965, kepha ukuzibophezela kwabo emfundweni yabesifazane kwasala. I 1982 isivumelwano sokubambisana phakathi kwalamakholishi amabili sidale indlela yokuhlangana ngaphakathi 1985 ukwakha lokho namuhla okwaziwa njengeRoyal Holloway, University of London.
Uyafuna xoxa ngeRoyal Holloway, University of London ? Noma yimuphi umbuzo, imibono noma ukubuyekezwa
Royal Holloway, University of London kumephu
Izithombe: Royal Holloway, University of London Facebook ezisemthethweni
Royal Holloway, University of London Izibuyekezo
Joyina ukuxoxa ngeRoyal Holloway, University of London.